एनआरएनको दस अर्ब रुपैयाँ शेयर बजारमा – MeroJilla.com
एनआरएनको दस अर्ब रुपैयाँ शेयर बजारमा
लन्डन,,११ माघ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सक्रियतमा विश्वभरका नेपाली समुदायबाट संकलन हुने १० अर्ब रुपैंयाको पूर्वाधार विकास कोषको रुपमा नेपाली शेयर बजारमा भित्रिने भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले गत सोमवार अल्डरशटका आयोजित ‘गैर आवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष’ सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै १० अर्ब रुपैंयाको पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे। नेपालको राजनीतिले समेत कोल्टे फेरेको अवस्थामा नेपालको पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले कोषको स्थापना गरिएको अध्यक्ष भट्टले बताए।
अन्तर्क्रियामा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपालमा राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत भइसकेको र स्थिर सरकार बन्न थालेको अवस्थामा संघले गरेको १० अर्ब लगानीको घोषणा ऐतिहासिक र दुरगामी सोचको कार्यक्रम भएको बताए। उनले पुराना आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर देश नबन्ने जिकिर गर्दै नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा संघका सल्लाहकार डा. हेमराज शर्माले कार्यक्रमको विषय तथा लगानीको खाका प्रस्तुत गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चीन, भारतलगायत अफ्रिकन मुलुक गैरआवासीय नागरिकको प्रभावले ती देशले समृद्धिको बाटो लिएको बताए। उनले देश विकासमा गैरआवासीय नेपालीले उल्लेख्य रुपमा योगदान पु-याउन सक्ने बताउदैं नेपाल उर्वर भूमि भएका कारण जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि प्रसस्त आम्दानी हुने बताए।